Bit By Bit - Running fanandramana - 4.2 Inona no fanandramana?
Randomized fanandramana efa efatra lehibe sakafo: fandraisana ny mpandray anjara, randomization ny fitsaboana, fanaterana ny fitsaboana, sy ny fandrefesana ny vokatra.
Ny fanandramana mifehy ny fanaraha-maso dia manana fitaovana efatra lehibe indrindra: ny fanekena ny mpandray anjara, ny famandrihana ny fitsaboana, ny fikarakarana ny fitsaboana, ary ny fandrefesana ny vokatra. Ny vanim-potoana nomerika dia tsy manova ny tena fototry ny fanandramana, saingy mahatonga azy io ho mora kokoa izany. Ohatra, tamin'ny lasa, mety ho sarotra ny nandrefesana ny fitondran-tenan'ny olona an-tapitrisany, saingy ankehitriny dia mitranga izany amin'ny rafitra nomerika maro. Ireo mpikaroka afaka mamantatra ny fomba fampiasana ireo fahafahana vaovao ireo dia afaka mameno fanandramana izay tsy ho vita teo aloha.
Mba hahatonga izany rehetra izany ho sarotra kokoa-na inona na inona mitoetra toy izany ary inona no niova-dia andramo ny fanandraman'i Michael Restivo sy Arnout van de Rijt (2012) . Te-hahalala ny vokatr'ireo valim-pikarohana tsy ara-dalàna izy ireo amin'ny fandraisana anjara amin'ny famoahana an'i Wikipedia. Ohatra, nianatra ny vokatry ny barnstars izy ireo , loka iray izay azon'ny Wikipedia rehetra afaka manome ny Wikipediana hafa rehetra hanaiky ny asa mafy sy ny fahazotoana. Restivo sy van de Rijt nanome barnstars ho an'ireo Wikipediana 100 mendrika. Avy eo, dia nanara-maso ireo fandraisana anjaran'ny mpisitraka avy any amin'ny Wikipedia nandritra ny 90 andro manaraka. Gaga tokoa izy ireo, ny olona izay nanomezany barnstars dia nanamafy ny fanovana vitsy taorian'ny nahazoany ny iray. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia toa nahakivy ny barnstars fa tsy namporisika ny fandraisana anjara.
Soa ihany, Restivo sy van de Rijt dia tsy nihazakazaka "manelingelina sy mitandrina" fanandramana; Izy ireo dia nihazakazaka fanandramana mifehy tsy tapaka. Noho izany, ankoatra ny fisafidianana ireo mpandray anjara ambony indrindra amin'ny fandraisana barnstar, dia nisafidy ihany koa ireo mpandray anjara ambony 100 izay tsy nomeny. Ireo 100 ireo dia sampana fitantanana. Ary, raha ny marina, iza no tao amin'ny vondronà fitsaboana ary iza no tao amin'ny vondrona mpitantana dia voafaritra imasom-bahoaka.
Rehefa hitan'i Restivo sy van de Rijt ny fihetsiky ny olona ao amin'ny vondrona mpitantana, dia hitany fa nihena ihany koa ny fandraisan'izy ireo. Ankoatra izany, raha nampitahan'i Restivo sy van de Rijt ny olona tao amin'ny vondrona fitsaboana (izany hoe nahazo barnstars) ho an'ny olona ao amin'ny vondrona mpitantana, dia hitan'izy ireo fa ny olona ao amin'ny vondrona fitsaboana dia nahatonga ny 60% bebe kokoa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia mamita ny anjara biriky eo amin'ny andaniny roa ireo, fa ny hafa kosa dia nanao haingana kokoa.
Araka ny asehon'ity fandinihana ity, ny antokon'ny fitondrana amin'ny fanandramana dia manakiana ny fomba tsy dia mampihetsi-po. Mba handrefana tsara ny vokatry ny barnstars, i Restivo sy van de Rijt dia nila nitandrina ireo olona tsy nandray barnstars. Imbetsaka, ireo mpikaroka izay tsy mahafantatra ny fanandramana dia tsy mahatsapa ny tombambidin-tsokin'ny vondrona mpitantana. Raha tsy nanana vondrona mpitantana i Restivo sy van de Rijt, dia mety ho nanatsoaka hevitra marina izy ireo. Ny vondrona mpiandraikitra dia tena manan-danja tokoa fa ny tale jeneralin'ny orinasa lehibe iray ao amin'ny banky dia nilaza fa telo ihany no azon'ireo mpiasa afaka entina amin'ny orinasa: noho ny halatra, noho ny fanorisorenana ara-nofo, na amin'ny fanatanterahana fanandramana tsy misy tarika mpitantana (Schrage 2011) .
Ny fandinihan'i Restivo sy van de Rijt dia maneho ireo singa efatra lehibe indrindra amin'ny fanandramana: ny fandraisana an-tsoratra, ny fombafomba, ny fitsabahana ary ny vokatra. Miaraka amin'izy ireo, ireo fitaovana efatra ireo dia ahafahan'ny mpahay siansa mihetsiketsika mihoatra ny fifandraisana ary mandrindra ny vokatry ny fitsaboana. Amin'ny ankapobeny dia midika fa ny olona ao amin'ny tarika fitsaboana sy fifehezana dia hitovy. Zava-dehibe izany satria midika izany fa ny fahasamihafana eo amin'ny vokatra eo amin'ireo vondrona roa dia azo lazaina fa ny fitsaboana fa tsy ny fifandonana.
Ankoatra ny fanehoana ohatra tsara momba ny mekanika amin'ny fanandramana, ny fandinihan'i Restivo sy van de Rijt dia maneho ihany koa fa ny lojistikan'ny fanandramana nomerika dia mety ho hafa tanteraka amin'ny fanandramana analoga. Ao amin'ny fanandraman'i Restivo sy van de Rijt, mora ny manome barnstar na iza na iza, ary mora ny manara-maso ny valim-panitsiana - maherin'ny vanim-potoana maharitra (noho ny fanitsiana tantaram-piraketana nosoratan'i Wikipedia). Izany fahafaha-manolotra fitsaboana sy fandrefesana ny vokatra tsy misy vidiny izany dia tsy mifanohitra amin'ny fanandramana taloha. Na dia nahitana olona 200 aza io fanandramana io dia mety ho nihazakazaka niaraka tamin'ny 2,000 na olona 20.000 mihitsy aza. Ny zava-dehibe indrindra dia ny fisorohana ny mpikaroka amin'ny fanalefahana ny fanandraman'izy ireo amin'ny 100 noho ny sandany; etikika izany. Izany hoe, Restivo sy van de Rijt dia tsy te-hanolotra barnstars amin'ny tonian-dahatsoratry ny tsy mendrika, ary tsy tian'izy ireo ny fanandramana hanakorontana ny vondrom-piarahamonina Wikipedia (Restivo and Rijt 2012, 2014) . Hiverina amin'ny sasantsasany amin'ireo fomba fijery etika napetrak'ireo fanandramana manaraka ato amin'ity toko ity sy ny toko faha-6 aho.
Ho famaranana, ny fanandraman'i Restivo sy van de Rijt dia maneho mazava tsara fa raha tsy niova ny lojikan'ny fanandramana, dia mety ho hafa tanteraka ny fanandramana momba ny fanandramana ara-dizitaly. Avy eo, mba ahafahana misoroka mazava kokoa ireo fahafaha-manao novolavolain'ireny fiovana ireny, dia hampitaha ireo fanandramana izay azon'ny mpikaroka atao amin'ny karazana fanandramana natao taloha.